निरु संसार: 2011
न म भएँ जून जस्तो
न त बनें सून जस्तो।।
लय शूर नभएको
भएँ म त धून जस्तो।।
अरुलाई खोक्रो पार्ने
हुन्न भन्थे घुन जस्तो।।
यो जीवन भोग्दा भोग्दै
भएँ चर्को नून जस्तो।।
आज भोली भएको छु
पिलिएको खुन जस्तो।।
सधैभरी आशा मात्र लिई नबसौं
बिश्वासमै सबै कुरा दिई नबसौं।।
अमूल्य छ यो जीवन फेरी मिल्दैन
पाएँ त्यसै भनी धेरै पीई नबसौं
आपसमा बाँडौ कुरा सुख दु:खका
मनमा पीडा लुकएर सिई नबसौं।।
कर्म गरे मिल्छ फल हुन्न बसेर
मरीतुल्य तुच्छ बनी जीई नबसौं।।
पौरखले हराभरा पार्छ जीवन
कोपीलामै सुकाएर खीई नबसौं।।
नभन न जिन्दगीको कुनै रंग छैन
यो जीवन रंगाउने हाम्रै ढङ्ग छैन।।
सधैभरी तनाब र अस्त ब्यस्त मात्र
खुशीसंग बाच्ने कला हामीसंग छैन।।
मान्नु पर्छ आँशु पनि जीवनकै पाटो
हाँसो मात्र पाए पनि मन दङ्ग छैन।।
के छैन र हामीसंग टिप्न सक्नु पर्छ
अँजुलीमा खुशी फूल्दा खै उमङ्ग छैन।।
रिस, राग, दम्भ अनि हठ छाडेपछी
आपसमा लड्नु पर्ने कुनै जङ्ग छैन।।
मेरा श्रध्देय दाजु स्व. हिरेन्द्र राज पन्तमा समर्पित
हेर्छु सधैं नभमा उदायौ कि भनेर
देख्दिन बित्छ रात ताराहरु गनेर।।
नफर्कने गरी गयौ भेट्नै सकिन कैले
तिम्रो नियास्रो मेट्न अझै सकिन मैले।।
उनु कि माला भन्छु फेरी झसङ्ग हुन्छु
छैनौ तिमी भनेर संझेर आफै रुन्छु।।
आउँछ याद संगै बसी टिका लगा'को
रोटी मिठाई फलले भरेर थाली सजा'को।।
रहेनौ साथ हाम्रो संझेर मन बुझाएँ
हेरेर फोटो तिम्रो टिका र फूल चढाएँ।।
उनें ति शब्दहरुलाई माया पनि मिसाई
अर्पण गरें यो माला श्रध्दा सुमन तिमीलाई।।
Labels: कविता, स्मरण
यो मुटु मेरो चर्केको चर्क्यै गरेको किन हो !
टेकेको धर्ती थर्केको थर्क्यै गरेको किन हो !
चाडको बेला खसेछ हेर जहाज बुद्ध त्यो
यो दु:ख पनि फर्केको फर्क्यै गरेको किन हो !
लाग्दथ्यो घाम आश्विन मास: दशैंको बेलामा
अझै नि पानी दर्केको दर्क्यै गरेको किन हो !
आए नि हुन्थ्यो अब त शान्ति यो तप भूमीमा
खुशीका दिन तर्केको तर्क्यै गरेको किन हो !
सत्यको हार हुँदैन भन्थे देख्दैछु अनौठो
असत्य चाहीं लर्केको लर्क्यै गरेको किन हो !
छाडी गयौ परदेशी माया लाउनु ब्यर्थ भयो
ह्रदयमा आफ्नो भनी सजाउनु ब्यर्थ भयो।।
आफ्नै मान्छे होला भनी टाढा हुन नदिएर
आँखा भित्र लुकाएर राख्नु पनि ब्यर्थ भयो।।
दिन बिते बर्ष बिते भेट हुन्छ भन्दा भन्दै
निष्ठुरीलाई आफ्नो मन फुकाउनु ब्यर्थ भयो।।
सधैभरी तिम्रो खुशी हेर्न पाउँ भनीकन
मंदिरमा गई शीर झुकाउनु ब्यर्थ भयो।।
सर्बस्व हौ तिमी भन्दै कति माया गरिरहें
दुख पीर पर्ला भनी मन दुखाउनु ब्यर्थ भयो।।
हराएँ है म त यतै नरिसाउ है सानु
न्यानो हाम्रो सम्बन्धलाई नचिस्याउ है सानु।।
बाध्यताले भेटघाट पातलिदै गयो
यसमा फेरी तिम्रो घुर्की नमिसाउ है सानु।।
नियास्रेकी म पनि छु टाढा भई बस्दा
मनको बह पोखें मैले नखिस्याउ है सानु।।
सदभाव तिम्रो पाइरहुँ स्वास रहुन्जेल
जिस्किएको ठानी माया नबिसाउ है सानु।।
साँचो कुरा भने मैले ख्याल गरेको हैन
साथी माझ दु:ख बाँडे नजिस्क्याउ है सानु।।
महिलाहरुको विशेष चाड तीजको उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दिदी बहिनीहरुलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना!!!
जान्न म त माइतीघर दर खान आज भो
छैन छड्के तिलहरी जानै लाज भो।।
दिदी बहिनी गए होलान झल्कने सारीमा
आफु भने घाँस काट्दैछु भित्री बारीमा।।
सबै लाउँछन् सूनको बाला पाउजु र तिलहरी
आफु भने सधेभरी ललिबिलरी।।
गएछ नि भावीले दु:खै दु:ख लेखेर
रुनु होला आमा मेरो दु:ख देखेर।।
नजाउँ भने दु:ख मान्लान आइन चेली भनेर
आमा पर्खी बस्नु होला बाटो हेरेर।।
जे सुकै होस् लाउँछु सारी आफ्ने औकात हेरेर
फजुल खर्च गर्दिन भो नक्कल गरेर।।
मनाउँ तिज सबै मिली संस्कृती यो जोगाउन
सहज बनाउँ यो पर्वमा सबै अटाउन।।
गर्नु हुन्न गहना र कपडाको प्रदर्शन
यस्तो गर्दा चाडबाडको घट्छ आकर्षण।।
Labels: गजल, तीज, शुभकामना
काँडा बिच फुल्छ गुलाब तर सधै हाँसेको छ
फक्रिएको यौवन लिई उसकै साथ बाँचेको छ।।
देखिन्न खै निरास ऊ पीडा साथ भएपनि
काँडासंग पनि उस्तै मिठो माया गाँसेको छ।।
सदभाव भए सबैलाई आफ्नै हीत देखिन्छ रे
माया गरी गरी उसले बैरभाव मासेको छ।।
आँखिर भोली झर्नै पर्छ अजम्बरी को छ यहाँ
सबैलाई सुख बाँडी आफ्नो दु:ख नासेको छ।।
सिकौं हामी पनि उसको जिउने कला कति राम्रो
दु:ख संग प्रीत गाँसी खुशीहरु साँचेको छ।।
धोती चोलो दौरा सुरुवाल लाको भए आह!!
देशकै पहिरन लगाएर गाको भए आहा!।।
कति खुशी हुन्थ्यौ मन सबलाई उस्तै देख्दा
यो देशको गौरब बढन पाको भए आहा!।।
स्कूल कलेज कार्यालय सबको पहिरन राख्न
आफ्नै घरेलुको रोजाई भाको भए आहा!।।
स्वदेशकै उध्योगले कति काम पाउँथ्यो
सबको मनमा देशप्रेम छाको भए आहा!।।
सबै भन्दा ठूलो कुरा सोंच राम्रो हुनु पर्छ
गाह्रो केही हुदैनथ्यो सबले धाको भए आहा!।।
सगरमाथा शिरमाथी कति राम्रो देश हेर
अझै राम्रो छ है हाम्रो आफ्नै भाषा भेष हेर ।।
बिर्सिने पो हुन कि अब नेपालीले नेपाली पन
दौरा सुरुवाल गुन्यु चोली बिर्से लाग्छ ठेस हेर
देखिएन कुनै प्रयास हाम्रो संस्कार जोगाउन
आफ्नै नाम मेटाउने हरे कस्तो रेस हेर।।
आफ्नो शान आफ्नो मान गुमाउँदा जित हुने
यस्तो लाछी खेल बरु नभएकै बेश हेर।।
भाइ भाइ फुटे हुन्छ देश ऐले बिखन्डन
फाले हुन्थ्यो सबले बरु रिस, राग व्देष हेर।।
गजल ३६: तिमीलाई तिर्खा लागे मेरो घाँटी सुक्छ बाबु
तिमीलाई तिर्खा लागे मेरो घाँटी सुक्छ बाबु
तिमीलाई भोक लागे मेरो गाँस रुक्छ बाबु।।
पढी गुनी ज्ञानी बनी फर्क आफ्नै देश संझी
तिमी टाढा हुँदाखेरी मेरो मन दुख्छ बाबु।।
परिश्रम गरौं यहीं फल्छ सुन यही धर्तीमा
तिमी साथ भयौ भने सबै दु:ख लुक्छ बाबु।।
देशको नाम उच्च पार्ने राम्रो काम गर तिमी
नराम्रो क्यै गर्‍यौ भने मेरो शीर झुक्छ बाबु।।
मैले जस्तै तिमीलाई वरपर सबले हेर्छन्
कुबाटोमा लाग्यौ भने दुनियाँले थुक्छ बाबु।।
सबै भन्दा ठूलो कुरा मति राम्रो हुनु पर्छ
पैसा भन्दा पनि तिम्रो नाम भए पुग्छ बाबु।।
सधैभरी हुन्छ शान
जीवनमा अघि बढ्न
गर्नु हुन्न अभिमान
असफल हुन्छौ. हामी
नभएर यही ज्ञान।।
आफै ठूलो बन्नु हुन्न
राख्नु पर्छ सबको मान।।
साधा जीवन उच्च बिचार
त्यस्कै गरौं सधै सम्मान।।
छम छम नाच्छु म त
खुशी हुँदै बाँच्छु म त।।
छोटो किन पार्नु आयु
सकेसम्म साँच्छु म त।।
सधै साथी कहाँ हुन्छ
एक्लै पनि हाँस्छु म त
घृणा द्वैष किन गर्नु
बरु माया गाँस्छु म त।।
रिस राग दम्भलाई
जरै देखी नास्छु म त।।
जीवनमा आइपर्ने दु:खसंग भाग्दिन म
हिंडीरन्छु आफ्नो बाटो पुरा नभै थाक्दिन म।।
दह्रो आँट म संग छ एक्लै हिड्न डराउँदिन
साथ आए खुशी हुन्छु कर गरी डाक्दिन म।।
अरुलाई दु:ख दिई आफु मात्र रमाउँदिन
अधिकार पाएँ भन्दै कर्तब्यलाई नाग्दिन म।।
सके गर्छु सबको हीत मर्दा जाने यही हो साथ
लाको गुन तिर भनी फेरी पैंचो माग्दिन म।।
जानै पर्छ छोडी आँखिर एकदिन यो संसार
जे छ त्यसमै रमाउँछु अरु बढी ताक्दिन म।।
जति बर्ष बाँचे पनि सक्रिय भै बाँचौं हामी
त्यसैले त यो जीवन सधै ब्यस्त राखौं हामी।।
सके सम्म आफ्नो काम आफै गर्ने गरौं बानी
निष्क्रिय यो शरीरमा जोस जाँगर भरौं हामी।।
बिहानको ब्रह्ममूर्त समयमै उठौं सधै
नित्य कर्म पछी एकछिन ब्यायाममा जुटौं हामी।।
शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्न सबलाई जगाउँ अब
साना तिना रोगलाई आफै पर भगाउँ हामी।।
राती ढिलो सम्म बस्नु घाम लाग्दा सुतिरनु
दुबै कुरा बेठीक हो भनीकन बुझौं हामी।।
रक्सी, चुरोट जुवा तास सबैलाई टाढा राखौं
सकेसम्म साकाहारी अमृर भोजन रोजौ. हामी
सहज जीवन बिताउन सकारात्मक सोंच लिउँ
सके सबको भलो गरौं दु:ख कहिले नदिउँ हामी।।
एक आपसमा मिल्नु जस्तो अर्को ठूलो शक्ति छैन
भाइचाराको नातालाई अब मजबुत पारौं हामी।।
कैले घाम कैले छायाँ यस्तै रैछ जिन्दगानी
कैले हुन्छु आगो जस्तै कैले हुन्छु पानी पानी।।
सधैभरी जीवनमा आए हुन्थ्यो खुशी मात्रै
सोच्छु मात्र तर त्यस्तो कहाँ मिल्थ्थो छानी छानी।।
राम्रो गरें भन्दा भन्दै कति बिग्रे काम पनि
किन गर्थे नराम्रो हो भन्ने कुरा जानी जानी।।
सोच्यो यौटा हुन्छ अर्कै किन हुन्न भने जस्तो
दु:ख आफै आइदिन्छ सुख ल्याउँछु तानी तानी।।
सोझो काम गरी खान्छु भन्दै कति दु:ख गरें
लाभ होला कि त भन्छु हुन्छ सबै हानी हानी।।
तिम्रो मेरो माया संगै मिसाएर लेखें गजल
ह्रदयका पीडाहरु बिसाएर लेखें गजल।।
धेरै भयो तिमीलाई नदेख्दा म आँत्तेकी छु
तिमी साथ नहुनाले रिसाएर लेखें गजल।।
कैलेकांही यो मनले नचाहेको गर्नु पर्छ
मनका सारा इच्छाहरू पिसाएर लेखें गजल।।
तिमीसित गर्नु पर्ने मनै भित्र रह्यो कुरा
त्यसैले त फेरी मन चिस्याएर लेखें गजल।।
आजभोली साँझ-बिहान राम खोज्दै छु म
जीवनको रथ हाँक्ने श्याम खोज्दै छु म।।
पाप धर्म के के गरें कता बढी भयो
बहीखाता भित्र आफ्नो नाम खोज्दै छु म।।
राम्रा भन्दा नराम्रामै लाग्यो कि त मन
सच्याएर स्वर्ग जाने काम खोज्दै छु म।।
जीवनको सार तत्व इश्वर नै ठाने
त्यसैले त पाउ छुने लाम खोज्दै छु म।।
बागमती र बिष्णुमती दुर्गन्धित भए
अन्तिम श्वास बिसाउने धाम खोज्दै छु म।।
काट मार छोडी बरु सबको दु:ख हरौं अब
ह्रदयको कुना कुना मायै माया भरौं अब।।
तेरो मेरो गर्दा गर्दै आफन्त नि टाढा भए
फेरि नाता जोड्नलाई आफै अघि सरौं अब।।
रीस, राग, झगडाले अशान्तिको मूस्लो बढ्यो
आऊ सबै मिलीकन शान्ति - बीज छरौं अब।।
आइसक्यो ठूलो बाढी खतरा छ हामीलाई
एक अर्कालाई समाएर यो संकट तरौं अब।।
धर्ती पनि साझा हाम्रो नेपाली हो यौटै नाम
आगो झुकी पानी उठी अंकमाल गरौं अब।।
आज बुद्ध पूर्णिमा, उनैको स्मृति स्वरुप आज साथीहरु माझ कविता बाडेँ है। सबैको सहभागीताको अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद।
आऊ बुद्ध एक पटक पुनर्जन्म लेउ
अशान्तिको जरो फाली शान्ति छरीदेउ।।
पैले पनि छर्‍यौ तिमीले विश्वभरी शान्ति
छिन्न भिन्न भयो ऐले उम्रिएर क्रान्ति।।
तिमीले दिएको अहिंसाको पाठ पनि मेटे
खाली छैन बार तिथी सधै पशु रेटे।।
हुन्न भने रिसाउँछन् गर्न सम्म गरे
धर्म निरपेक्ष हुँदा यस्तै हुन्छ अरे।।
कति बर्ष लगाएर तिमीले ज्ञान पायौ
अनि पो त प्राणी सबको ह्रदयमा छायौ।।
लौन फेरी सबैलाई ब्युझाउन आउ
अहिंसा हो परम् धर्म भन्ने ज्ञान फैलाउ।।
Labels: कविता, बुद्ध पूर्णिमा
कति बस्छौ आगो बनी
हुनु पर्छ पानी पनि।।
दम्भलाई त्याग्नु पर्छ
सधै यस्तै हुन्न भनी।।
जीवनको रीत यस्तै
कोही दीन कोही धनी।।
थाहा छैन अन्त्य कस्तो
बस्नु पर्ला दिन गनी।।
जानै पर्ने होलातनी।।
दियौ बिष ल खा भनी समाएर पिएँ मैले
त्यही बिष पचाएर हाँसी हाँसी जिएँ मैले।।
तिमीलाई दिन भनी साँचेको त्यो माया पनि
मुटु सबै रित्याएर भए जति दिएँ मैले।।
तिम्रो साथ मेरो बल भन्दै दु:ख सहीरहें
मन फाट्दा तिम्रै लागी सयौं चोटी सिएँ मैले।।
सधैभरी अघि बढ सफलता चुम तिमी
तिम्रा सारा बाधाहरु बटुलेर लिएँ मैले।।
मेरी जन्मदाता आमा आज यो संसारमा हुनुहुन्न तर उहाँको न्यानो स्पर्षको अनुभुति अझै ताजा छ। आज मातातिर्थ औसीं, आमाको ममतासंग जोडिएको विषेश दिन। यसै अवसरमा श्रध्दा सुमन स्वरुप यी हरफ मेरी आमालाई। मायाकी खानी संपूर्ण आमाहरूलाई लाख लाख शुभकामना!!!
"आमा सरी अरु तीर्थ हुदैनन् रे भन्छन्
ईश्वर पनि आमा भन्दा ठुला छैनन् भन्छन्।
तिम्रो माया बराबरी कुनै बस्तु छैन
ईश्वरको सृष्ठिमा नै अर्को श्रेष्ठ छैन।।
सगरमाथा भन्दा पनि चुली मेरी आमा
देउता भन्दा कति गुना ठूली मेरी आमा।।"
सम्पूर्ण अग्रज स्रष्टा तथा गजलप्रेमीहरूलाई कमीकमजोरी औँल्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
थप्पड खाने डरले नेता छलेर हिड्दैछन्
खानेले खाए नपाउने चाही जलेर हिड्दैछन्।।
देशको पीर केही छैन तिनलाई लुटेर खानु छ
भातको साटो पिउँछन् रक्सी ढलेर हिड्दैछन्।।
गुनिलो काम गरे पो मिल्छ ताकत शरीरलाई
ठगेर खाको पचेन क्यारे गलेर हिड्दैछन।।
के लाज भो र राहदानी पनि बेचेर अरुलाई
पैसाको लागी आफैलाई जोखिम मलेर हिड्दैछन्।।
मलिन थियो जीवनको दीयो थिएन भरोसा
हिजोको आजै झल झल हुँदै बलेर हिड्दैछन्।।
सुकेको बुटो झरेका पात थिएनन् कोपिला
गजबै भयो आज त फेरी फलेर हिड्दैछन्।।
एउटी नारीको बेदना सुनेपछी अनायासै यस्तो गजल फुर्‍यो। यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनुहुन अग्रजहरू तथा गजल प्रेमी सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। विदेशमा बस्नुहुने साथीहरुले अन्यथा नलिदिनु होला। धन्यबाद।
सबै कुरा बिर्स्यौ अरे टाढा गई बसेपछी
आफ्नी काली संझन्नौ रे गोरीसंग फँसेपछी।।
सुन्छु तिम्रो घरजम पनि उतै हुने भयो
छाड्न मन लागेन रे पिरतीले कसेपछी।।
डाँडाकाँडा चढ्नु पर्ने खान पनि दु:ख थियो
सुख पाएँ भन्छौ अरे विदेशमा पसेपछी।।
भन्थ्यौ तिमी फूल जस्ती हेरिरहु जस्तो लाग्छ
देख्यौ राम्री उसैलाई लाली पाउडर घसेपछी।।
म पनि त किन बस्नु कुरी तिम्रो घरबारी
द्यौता मानी पुजेपनि सर्प बनी डसेपछी।।
कसैलाई दु:खी पार्ने गजल अब लेख्दिन भो
आफ्नो पीर अन्त सार्ने गजल अब लेख्दिन भो।।
लेखुँला म गीत बरु तिमीलाई हँसाउने
तर तिम्रो आँशु झार्ने गजल अब लेख्दिन भो।।
पस मेरो आँखा भित्र बस सधै नानी बनी
तिम्रो मेरो माया मार्ने गजल अब लेख्दिन भो।।
रहर हैन बाध्यताले विदेशमा पुग्यौ कठै
मुग्लानीको पीडा खार्ने गजल अब लेख्दिन भो।।
जीवनमा आँशु भन्दा हाँसो धेरै पाएको छु
त्यसैले त बाजी हार्ने गजल अब लेख्दिन भो।।
'शुभकामना' नयाँ वर्ष २०६८ को (गजल २३)
नयाँ बर्ष २०६८ सालको मंगलमय विहानीले यहाँहरूको जीवनमा उज्यालो छरोस्। तन मन र बिचार स्वस्थ्य रहोस् ।गाँस बास र कपासको अभाव नहोस्। नराम्रा कुरा कानले सुन्न नपरोस्। नराम्रा कुरा आँखाले हेर्न नपरोस्। मुखले दुर्बाच्य बोल्न नपरोस्।पाइला सधै प्रगति पथमा लम्किरहुन र हातले सधै सिर्जनशील काम गरोस भन्ने चाहना सहित मंगलमय शुभकामना संपूर्ण साथीहरूलाई। बाँकी कुरा यो गजल मार्फत ब्यक्त गरे। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहुन संपूर्ण अग्रजहरू तथा गजल प्रेमीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।
आफै ठूलो हुने बानी छोड्न मन लागोस
घात गर्ने अहम् पनि तोड्न मन लागोस।।
तेरो मेरो भनी सधै भाग भण्डा गर्ने
साघुरो यो मनलाई मोड्न मन लागोस ।।
अशान्तिले तहस नहस भयो सबै तिर
शान्ति रोक्ने अबरोध फोड्न मन लागोस।।
सप्रिएन देशको हालत झारपात बढ्यो
बरु सबै मिलीजुली गोड्न मन लागोस।।
कति बस्नु उकुस मुकुस आँखा तरी तरी
भाइचाराको नाता फेरी जोड्न मन लागोस।।
Labels: गजल, नयाँ बर्ष, शुभकामना
सक्दिन म गर्न भनी लुक्नुहुन्न अब नारी
अधिकार लिनलाई चुक्नुहुन्न अब नारी।।
सिर्जनामा रमाउँछौं पौरखमा जुटिरन्छौं
सहयोग माग्दै बाटो ढुक्नुहुन्न अब नारी।।
आधा धर्ती ओगटेका हामी नारी ठूलो बल
उन्नतिको मूल बनौं सुक्नुहुन्न अब नारी।।
विश्व सामु नेपालको शीर उचा राख्नलाई
अघि बढ्नु पर्छ मिली रुक्नुहुन्न अब नारी।।
चुला चौका मात्र पनि हैन हाम्रो कर्म थलो
पुराना कु- संस्कारमा झुक्नुहुन्न अब नारी।।
तिमीलाई ओत दिने पाली बन्न पाए
तिम्रो खाना राखिदिने थाली बन्न पाए।।
दु:ख सबै उखेलेर फालिदिने थिएँ
हेरचाह गर्ने तिम्रो माली बन्न पाए।।
गुन्जाउँथे रनबन लेक देखि बेशी
तिमी गीत म चैं त्यस्को ताली बन्न पाए।।
जाई,जुई,गुराँसमा माया मिसाएर
तिम्रो जीवन रंगाउने लाली बन्न पाए।।
सह बनी बसिदिन्थे सधै भकारीमा
तिम्रो हात्ले भित्र्याउने बाली बन्न पाए।।
माया गर्छु भन्दा भन्दै किन आँशु झार्‍यौ भन
मेरो झुप्रो छोडी किन अर्कै डेरा बार्‍यौ भन।।
हिजो सम्म ढकमक फुलिराथ्यो तर आज
यो डालीको थुँगा टिपी कुन डालीमा सार्‍यौ भन।।
भन्थ्यौ सधै हेरी राख तिम्रो मन भित्र फुल्छु
हेर्दा हेर्दै तर किन अर्कै बाग चार्‍यौ भन।।
तिमी बिना अडिदैन मेरो मन कतै पनि
थाहा थियो सबै फेरी किन एक्लै पार्‍यौ भन।।
संगै बाच्ने संगै मर्ने भनी बाचा गरेकोहो
आफु बाँची मलाईचै किन अघि मार्‍यौ भन।।
फड्को मारी हिड्यौ तिमी दाउ हात परे पछी
जित तिम्रै हुनु पर्थ्यो तर किन हार्‍यौ भन।।
घरी घरी उर्लिरने छाल जस्तो रैछ माया
घुमी फिरी त्यही पुग्ने ताल जस्तो रैछ माया।।
ह्रदयमा बसेपछी बिर्सिहाल्न गाह्रो हुने
जुवाडेको जुवा खेल्ने खाल जस्तो रैछ माया।।
मन मिली मिठो साथ दिन सके सधैभरी
ओत दिने बर्षादको पाल जस्तो रैछ माया।।
जति फोयो उति गाँठो फुकाउन धेरै गाह्रो
माकुरीको अल्झिएको जाल जस्तो रैछ माया।।
जाली माया देखाएर आकाशको तारा झार्ने
झूठो बाचा गर्नेलाई काल जस्तो रैछ माया।।
इतिहासको पाना भित्र दसी हेर कस्तो हुन्छ
वीर शहीद नाम लेख्ने मसी हेर कस्तो हुन्छ।
जीवन दान गरी लडे बिर्सी दिए ऐले सबै
राजनीतिको फन्दा भित्र फँसी हेर कस्तो हुन्छ।
जालसाजी छ जता ततै काम गर्ने मरी राछ
अत्याचारको पीडा भित्र पसी हेर कस्तो हुन्छ।
आन्दोलनको मर्म बुझी सबै एक भए पछी
रातो सिंदुर बिजयको घसी हेर कस्तो हुन्छ।
नेपाललाई माया गर्ने सबै मन एक भई
बाहुपासको डोरी जोडी कसी हेर कस्तो हुन्छ।
Dedicated to my lovely son, Aagat Awasthi (on his 23rd Birthday) and to all his age-group-peers, whose birthday is on the 21st March.
सधै तिमी हिडिराख प्रगतिको बाटो
नबिर्सेर कहिले पनि यो देशको माटो
माटो भए आफु हुन्छु भन्ने कुरा जान
आफ्नो धर्ती स्वर्ग भन्दा राम्रो हुन्छ मान।
फल फूल यही धर्तीमा गर्छु यही कामना
जन्मदिनको तिमीलाई धेरै धेरै शुभकामना!!!
ज्ञानी बनी गर्‍यौ भने सधै असल काम
त्यही कामले राख्छ तिम्रो, देश र कूलको नाम
ज्ञानको ज्योति बलोस् सधैं तिमी हिड्ने बाटोमा
सधैभरी रमाउ तिमी यै धर्तीको माटोमा।
निरोगी भै बाँच तिमी गर्छु यही कामना
खराब संगत,रक्सी, चुरोट, जुवा अनि तास
कुलत हो यो जीवनलाई गर्छ विनास
त्यस्तो तिर कहिल्यै पनि नलगाई मन
देशको शीर उचा राख्ने असल मान्छे बन।
खुशी छाओस् जीवनमा गर्छु यही कामना
जन्मदिनको तिमीलाई धेरे धेरे शुभकामना!!!
जीवनमा कहिले पनि नहोस् तिम्रो हार
थाम्न सक जति पनि यो धर्तीको भार
सन्तती हुन ठुलो आड बाबु आमालाई
गर्ब गर्छौ तिमी जस्तो असल पुत्र पाई।
विश्वलाई जित तिमी गर्छु यही कामना
Labels: आगत, कविता, जन्मदिन, शुभकामना
आऊ सबै खेलौं अब एकै ठाउँमा होली
पूर्व मेची महाकाली सबको माया घोली ।।
यो देश हो हामी सबको फूलबारी साझा
टुक्र्याउन हुन्न यसलाइ जोडौं दिल खोली।।
वैरभाव गरी यहाँ के पो लानु छ र?
छोडी सबै जानु पर्छ आज हो कि भोली।।
जानु पर्छ रित्तै अरू लाने चिज छैन
जान्छ भने हाम्रो साथ त्यही मिठो बोली।।
उही देश उही माटो धारा पानी साझा
बेग्ला बेग्लै गुठ हैन बनौं एउटै टोली।।
शान्ति,प्रेम,सदभावको मिसाएर रंग
आपसमा मिली खेलौ रंङ्गिचङ्गी लोली ।।
"पानी बनेर बग्यौं धेरै, आगो बनेर उठौं अब
नारीका हितको लागि कम्मर कसेर जुटौं अब।"
संपूर्ण साथीहरूलाई अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना!!!
इतिहासमा लेखिएको गाथाको जीत हो नारी
सदभाव बनाई राख्ने सबैको हित हो नारी।।
धर्तीलाई भिजाएर सिर्जनामा रमाइदिने
सृष्टीलाई जोगाई राख्ने एउटा रीत हो नारी।।
हाँसो खुशी र मायाले बनेको सुमधुर धून
संगीतले भरिएको तरङ्गीत गीत हो नारी।।
गाँसेर प्रेमरूपी माला सजाएर सबै तिर
एउटै शूत्रमा बाँधने सबैको मीत हो नारी।।
निभाएर मनका ज्वाला, प्रेमको सागर बनी
प्रचण्ड गर्मीका दिन छहारीको शीत हो नारी।।
बाँडेर मनको खुशी, प्रेमको भाव जगाएर
सबैको मनमा छाउने लजालु प्रीत हो नारी।।
राख तिम्रो आँखा भित्र नानी बनी बस्छु
तिम्रो तिर्खा मेटाउने पानी बनी बस्छु।।
कुलतमा तिमीलाई पर्न दिने छैन
तिम्रा सबै राम्रा राम्रा बानी बनी बस्छु।।
जीवनको अन्त्यसम्म तिमीलाई दिन
नरित्तिने मायाको म खानी बनी बस्छु।।
अरू केही दिने कुरा छैन मेरो साथ
तिम्रीलाई माया दिई दानी बनी बस्छु।।
कहिले पनि तिमीसंग टाढा हुने छैन
अब सधै तिम्रै मनकी रानी बनी बस्छु।।
सधै साथ कहाँ हुन्छ मान्नु पर्छ त्यो पनि
संसारको रीत यस्तै जान्नु पर्छ त्यो पनि।।
एक्लै आउने एक्लै जाने संगै कोही हुन्न रे
प्रकृतिको नियम यस्तै धान्नु पर्छ त्यो पनि।।
बाँचुन्जेल माया मोह आफन्त र पराई
सबै एकै हुँदैनन् रे छान्नु पर्छ त्यो पनि।।
फुस्किन्छ कि मायाजाल,छुटे कि त आफन्त
शाहस अनि मायाँले नै बान्नु पर्छ त्यो पनि।।
गाह्रो हुन्छ रीत मिलाई जीतको सास फेर्नलाई
कहिले काहीँ हार मानी तान्नु पर्छ त्यो पनि।।
कांग्रेसीको बानी त्यस्तै बसी कुरा काट्ने मात्र
काम केही गर्ने होइनन् ठूला भाषण छाँट्ने मात्र।।
आफ्नो हुती केही छैन अरुसंग ठ्याक्क मिली
कहिले यता कहिले उता एमाले चै चाट्ने मात्र।।
जंगलबाट आएदेखि सदन सम्म पुग्दा पनि
माओबादी सधैभरी आफ्ना कुरा ढाँट्ने मात्र।
आफू सधै अल्प मतमा अरू दलको बुइ चढी
मधेशी दल पदसंग आफ्नो मत साँट्ने मात्र।।
साना दलका लुला खुट्टा आफै टेक्ने छैन आँट
जस्लाई द्ह्रो हुनु पर्छ उसले तिनलाई बाट्ने मात्र
आफ्नै मात्र दुनो सोझ्याई सहमतिमा नआउँदा
जति सभा बसे पनि दलका कुरा फाट्ने मात्र।।
मैले बास माग्न जाँदा उस्को मन खाली थियो
दूई जना अटाउने सानो एउटा पाली थियो।।
रमाइदिएँ त्यै पालीमा गुराँस जस्तै फूलिदिएँ
हाम्रो बाग सजाउने उ चाहीं राम्रो माली थियो।।
उस्को अरू को थियो र आँखाको म नानी भएँ
मेरो पनि उ नै एउटा समाउने डाली थियो।।
आँशु सबै उधारेर हासो खोजी टालिदिएँ
त्यसपछि त जीवनमा सबै तिर लाली थियो
खुशीको गीत उसले रच्यो मैले त्यही गाइदिएँ
त्यो गीतमा धुन भर्ने हाम्रै हातको ताली थियो।।
प्रणय दिवसको शुभकामना
"तिम्रा सारा दु;खहरु आजै देखि मेटियोस्
दुख बुझ्ने मन मिल्ने एउटा साथी भेटियोस्।।"
प्रणय दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सबैलाई!!!
Labels: प्रणय दिवस, शुभकामना
मैले जस्तै तिमीले पनि माया गरे हुन्थ्यो
कहिले काहीं साँझपख बेसी झरे हुन्थ्यो।।
स्थीर छैन यो मनलाई कति डुलाई राखु
त्यो मन पनि बरु अब यतै सरे हुन्थ्यो।।
तिम्रो भन्दा मेरो पनि कम्ति छैन माया
माना पाथी ल्याई बरु ऐले भरे हुन्थ्यो।।
वारि म छु पारी तिमी भेट त्यसै हुन्न
आँट गरी तिमीले नै खोली तरे हुन्थ्यो।।
दुबै जना संगै संगै मिली बस्नलाई
आइपरेका बाधाहरु सबै टरे हुन्थ्यो।।
संबिधान किन लेख्ने? कसले लेख्छ?
संभव भए सम्म सबै देश विदेश घुम्ने
बिहानको समयमा हावा खान डुल्ने
धाम धुम जसरी नि पैसा कमाउने
नपाएको दु:ख आफै किन बेसाउने।
कि त मन्त्री हुनु पर्छ कि त सांसद बन्नु पर्छ
नगरेरै पुगेपछी किन काम गर्नु पर्छ
लेख्ने कुरा सकिदैन दिन बिती सक्यो
खरीयत छैन अब म्याद गुज्रिसक्यो
नेता हुन गाह्रो छैन भाषण घोके पुग्छ
कुर्ची तानातानमा कसले संबिधान लेख्छ?
बैंशालु त्यो यौवनमा जवानीको मात थियो
तिमी एक्लै म नि एक्लै त्यो जुनेली रात थियो।।
चकमन्न भएपछि मेरो छेउ आयौ तिमी
उस्तै उस्तै दूई आत्माको मिलनको बात थियो।।
गुम्सिएर बसेका ती भित्र भित्रै ब्यथाहरु
बिसाउन नपाएर मनमा ठूलो खात थियो।।
तिमी सामु देखेपछी मेरो होस हराउँदा
अँगालोमा थामी राख्ने तिम्रै कोमल हात थियो।।
चेत मेरो नआउँदै तिमीले आफ्नै काखमा लिई
अंग अंग छोइदिनु यो चाहीं ठूलो घात थियो।।
बल्ल मैले पाएको छु भने जस्तो साथी
कहिले राख्छु आफ्नै काखमा कहिले टेबुल माथी।।
मेरा मनका कुराहरु सबै टिपोट गरी
जोगाएर राखिदन्छ पाना भरी भरी ।।
देखाउन मन लागे आफ्ना सृजनालाई
पुर्‍याइदिन्छ एकैछिनमा सबै साथी भाइलाई।।
एउटा ठाउँ मन नपरे खोजिदिन्छ अर्को
जति चोटी ठटाए नि छैन झर्को फर्को।।
कसैलाई भेट्न खोजे गर्छ त्यो नि पुरा
सबैलाई बोलाएर गराइदिन्छ कुरा ।।
बैनी बस्छिन् क्यानडामा अमेरीका भाइ
कुरा गर्छन् दुबै जना मेरै सामु आई।।
दिक्क लागे घरी घरी बस्छु यसैसंग
देश विदेश घुमाएर पार्छ मलाई दङ्ग।।
पढन मन लाग्यो भने धेरै कुरा खोज्छ
के पढने हो हजुर भनी फेरी मलाई सोध्छ।।
कम्प्युटर हो नाम यसको मेरो मिल्ने साथी
तिमीसंग मैले माया लाको हुँदै होइन
चौतारीमा प्रेमको गीत गाको हुदै होइन।।
नभएका झुट्टा कुरा फैलाउँछौ तिमी
द्यौरालीमा भेट्न पनि आको हुँदै होइन।।
मेलापात दाउरा घाँस सबै काम छोडी
तिमीलाई खोज्दै बेसी धाको हुँदै होइन।।
अबदेखि जीवनभरी साथ दिन्छु भनी
तिम्रो सामु कसम मैले खाको हुँदै होइन।।
बाबा आमासंग तिमीले घरमा भेट गरी
मेरो हात माग्ने कुरा भाको हुँदै होइन।।
हिजो आज गाउँभरी तिम्रै हल्ला सुन्छु
के भएर त्यस्तो भयौ मन मनै गुन्छु।।
आँखिर गल्ती कस्को थियो भन नढाटी
तिम्लाई संझी म पनि एक्लै बसी रुन्छु।।
दिनभरी काम गर्छु सबै बिर्सिएर
रातभरी सपनीमा तिमीसंगै हुन्छु।।
दुब्लाएका छौ रे तिमी भन्ने कुरा सुन्दा
दु:ख लाग्छ रोएर आँशुले मुख धुन्छु।।
तन टाढा भएपनि मनले मान्दैन
चित्त थाम्न नसकी तिम्रो तस्वीर छुन्छु।।
तिम्रै नजिक आई अब बसिदिन सक्छु
थाहै नदिई तिम्रो मनमा पसिदिन सक्छु ।।
मलाई छोडी अन्त कतै जान खोज्यौ भने
बाहुपासमा तिमीलाई कसिदिन सक्छु ।।
तिमी भन्छौ भने कुनै डर छैन मलाई
भीरै बाट भएपनि खसिदिन सक्छु।
माया गर्दा गर्दै पनि गलत अर्थ लाए
भर छैन फेरी हेर डसिदिन सक्छु ।।
यति गर्दा फेरी पनि तिमीले मुख मोडे
आखिरमा खरानी नै घसिदिन सक्छु ।।
के हुनु र मस्तिष्कमा सबै खाली खाली
सोच्नै केही सकिएन नेता परे जाली।।
बिकास र योजनाका काम ठप्प पारी
खाने बेला सबै मिली बजाउँछन ताली।।
काम केही नगरेरै खान्छन तलब भत्ता
त्यही भएर थप्पड दिदां गर्छन उल्टै गाली।।
पदको लागी मरीहत्ते गर्छन सबै दल
सकेनन् कोही जिताउन आफ्नो मत हाली।।
विदेश जान पर्‍यो भने नाता गोता खोजी
जान्छन् सबै हुल बाँधेर देशकै इज्जत फाली
फोहर मैला जताततै दुर्गन्धित भो सबै
स्वच्छ बग्ने बागमती नि बनाइहाले नाली
गोजी भर्ने होडबाजी हो छैन देशको माया
यो भूमीलाई जोगाउन चाहियो राम्रो माली।।
तिम्रो मुटु नजिक मलाई सर्न मन लाग्यो
तिम्रै आँखा वरिपरी चर्न मन लाग्यो।।
तिम्रा दु:ख पीडा सबै उखेलेर फाली
रंगीचंगी फूलको बिऊ छर्न मन लाग्यो
नौनी जस्तै कोमल तिम्रो त्यो ह्रदय भित्र
मह जस्तै मिठो रस भर्न मन लाग्यो।।
मन मिल्ने मान्छेलाई आफ्नो नजिक पाउँदा
फुकाएर मनका कुरा गर्न मन लाग्यो।।
बीच बाटोमा तिमीले मेरो हात समाई दिदा
तिमीसंगै जीवन डुङ्गा तर्न मन लाग्यो।।
आज भोली धनमा सबको फल्छ जीन्दगी
फल्दा फल्दै कुहिएर गल्छ जीन्दगी।।
धनी गरीब जे भएनी भोक उस्तै हो
एकै छाक खाए पनि चल्छ जीन्दगी।।
कसैलाई ओछ्यानमै सुती सुती पुग्ने
कसैलाई चलिरहने कल छ जीन्दगी।।
एउटा पाटो फर्की हेर्दा स्वर्ग सरी मस्ती
अर्को पाटो सडेको मल छ जीन्दगी।।
कहीं भने उज्यालो छ झिलिमिली बत्ती
कहीं भने अध्यारोमै बल्छ जीन्दगी।।
सबैलाई एकैनास कहाँ हुन्छ र
भोको पेट सुतेर नै जल्छ जीन्दगी।।
नचाहिदा हल्लाहरु चल्छ भने चल्न देउ
तिम्रो मेरो बिचमा कोही जल्छ भने जल्न देउ।।
हामी दुई बिचको साइनो अजम्बरी हुने गरी
झ्याङ्गिएर लटरम्म फल्छ भने फल्न देउ।।
माया जस्तो ठूलो कुरा सृष्टीमा नै छैन अरु
यसैमा यो हाम्रो जीवन ढल्छ भने ढल्न देउ।।
हाँसी खुशी रमाउँदै जीउने इच्छा हुँदा हुँदै
ईश्वरले नै हामीलाई छल्छ भने छल्न देउ।।
गर्छु धेरै माया भन्थ्यौ आँखिर मन मोड्नु रैछ
संगै बस्ने बाचा गर्थ्यौ खै त अहिले छोड्नु रैछ।।
निसानामा पार्‍यौ मलाई ब्याधा बनी आयौ तिमी
मिठो माया जालमा पारी आखिर बन्धन तोड्नु रैछ।।
तिमी बिना मेरो जीवन छैन कुनै सार भन्थ्यौ
ढुङ्गा बनी आयौ तिमी मेरो मटु फोड्नु रैछ।।
आज पनि दुई भाइ लडदैछन् अरे
दिन दिनै शत्रुहरू बडदैछन् अरे।।
जति सुझाव दिएपनि केही लागेन
संविधान लेख्न नेता हड्दैछन् अरे।।
आरोप र प्रत्यारोपमा दिन बिताउँदा
भएका ती खेस्रा पनि सडदैछन् अरे।।
आज हुन्छ भोली हुन्छ भन्ने आशमा
जनताहरु दल्दलमा गडदैछन् अरे।।
अब पनि यस्तै गरी दिन बिताए
चार भञ्याङ कटाउन खडदैछन् अरे।।
[नेपालीपोष्ट.कम मा प्रकाशित]
Labels: गजल, नेपाली पोष्ट
ऊ केही गर्दिन, ऊ हाउस वाइफ हो
ऊ केही गर्दिन ऊ हाउस वाइफ हो। उसले हाउस् वाइफ भन्ने शब्द सुनेकी मात्र हो अर्थ बुझेकी छैन उसको श्रीमानले उसको परिचय यसरी नै दिने गरेक...
तिमीलाई तिर्खा लागे मेरो घाँटी सुक्छ बाबु तिमीलाई भोक लागे मेरो गाँस रुक्छ बाबु।। पढी गुनी ज्ञानी बनी फर्क आफ्नै देश संझी तिमी टाढा हुँ...
पशु बली नदेउ मलाई भन्छिन् दुर्गे माता
यो मेरो पुरानो कविता हो, तर अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक लागेकोले पुन: यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरेकी छु, बाँकी हजुरहरुको प्रतिक्रियाको आशामा...
सगरमाथा शिरमाथी कति राम्रो देश हेर अझै राम्रो छ है हाम्रो आफ्नै भाषा भेष हेर ।। बिर्सिने पो हुन कि अब नेपालीले नेपाली पन दौरा स...
डियरनेपाल डट कम